Kerala Fanjakana Atsimo Andrefan’i India : Fihotsahan’ny Tany Nahafaty Olona No Nateraky Ny Oran’ny Talio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2013 11:35 GMT
Saingy matetika dia fotoana manan-danja sy misy tombony ho an'ny fanjakana ny fotoanan'ny talio izay mbola mitohy mandrava an'i Kerala amin'ity taona ity. Voafidin'ny gazety boky National Geographic ho iray amin'ireo toerana 50 ho tsy maintsy tsidihana i Kerala, noho ireo honahonany mahafinaritra sy ireo talio. Tena tadiavin'ny mpizaha tany fatratra ny fotoanan'ny talion'i Kerala noho ny hatsarany miaraka amin'ny orana izay manova ny endriky ny tontolo iainana.
Fa hafa ny tamin'ity taona ity. Nanomboka tamin'ny volana Jona, mbola tsy nitsahatra ny roa volan'ny orana tsy ankijanona. Vetivety dia feno hatrany amin'ny haavony ireo tohodrano, hany ka voatery nosokafana ny hidin-drano mba hisorohana ny fihoarany, izay mampisavoritaka ny olona mivelona manakaiky ny renirano sy ny farihy. 18 tongotra mialohan'ny hanokafana ny hidin-drano sisa dia ho vaky ilay tohodrano lehibe, ny tohodranon'i Idukk.
Nihoatra 40 isanjato ny rotsak'orana tamin'iny roa volana iny ka nahatonga ny fanjakana ho latsaka anaty korontana tanteraka. Notaterin'ny gazety Hindu fa manodidina ny 2.100 eo ho eo ireo olona nafindra ho any amin'ny tobinà tra-boina 36 hatramin'ny nahatondraka ny faritr'i Thiruvalla taluk. Ny fambolena no tena voa mafy, tsy tratra ny fangalàna ny caoutchou ary lasan'ny rano ny vary vao nambolena telo na efatra herinandro tany aloha.
Nandefasan'i Renuka, monina any Alwaye faritra izay tena mahery ny safodrano, sary betsaka tao amin'ny Google Plus-ny izay maneho ny haavon'ny reniranon'i Periyar noho ny orana. Monina manamorona ilay renirano izy ary matahotra ny zavatra mety hiseho raha mbola mitohy herinandro vitsivitsy ny orana.
Nitondran'i Sapta Varnangal fanehoan-kevitra ny zava-misy any Muvattupuzha:
Niatrika ny zava-dratsy nateraky ny orana miaraka amin'ny fihotsahan'ny tany namono olona maro i Idukki. Nosoratan'i Harish Vasudevan tao amin'ny Facebook-ny fa azo atao tsara ny niala iny fihotsahan'ny tany iny, raha toa ka natao tsara ny asa fananganana manaja ny tontolo iainana fa tsy fanomezana alàlana izao karazana fananganana foto-drafitrasa rehetra izao no natao:
Samy tsy misy afaka maka lesona amin'iny faharavana iny na ny firehana ara-politika any Idukkis na ireo vahoaka. Tontosa ireo tetikasa fampandrosoana tany Idukki niaraka tamin'ireo karazan-tany izay samy manana ny firafiny. Fihotsahan'ny tany sy faharavana no vokany nandritra ny fihavian'ny orana. Nanao tatitra ny Komitin'ny Gadgil fa ilaina atsahatra ny fitrandrahana ny tany. Notsipahan'ny mponina any Idukki, ao anatin'izany ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana ilay tatitra. Fa ankehitriny, tsy maintsy miatrika mitondra valin-kafatra ho an'ny vahoaka izy ireo.
Nelson Joseph, mponia iray ao Idukki, dia nitsipaka ilay filazàna, tamin'ny fitenenany hoe Tsy noho ny asa fanorenana akory no mampihotsaka ny tany:
Mametraka laharan'ny antso an-tariby ao amin'ny Facebook-ny i Prasanth Gulfu avy any Alwaye raha toa ka miha-ratsy ny toe-draharaha :
Ireto misy lahatsary amin'ny YouTube mampiseho ny safodrano, tahaka ity lahatsary ity nakarin'i Real High Definition ity :
Nokianin'i Hafiz Rasheed (@hfz_r), injeniera, ny fanimbàna ny ala sy ny fiovaovan'ny toetr'andro :
Nahatsiaro ny fotoam-pialan-tsasatra fanaony any Kerala rehefa mandritra ny safodrano tahaka izao i Anna MM Vetticad (@annavetticad), mpanoratra, mpanao gazety sady mpampianatra, mahazatra ny olona tonga mitsidka amin'ny alàlan'ny làkana :
Mohan Kannan (@mohankan), manampahaizana manokan'ny HR Process Outsourcing , dia nitatitra ny zava-misy any Muvattupuzha:
Taterina amin'ny làkana kely mankany an-trano ny sakafo any muvattupuzha #kerala #floods
Taterin'i Nidheesh MK (@ReporterNid),mpanao gazety, fa safotry ny rano tanteraka i Aluva :